Tena betsaka izy ireny raha araka ny fanazavan’ny farmasianina iray sendra anay. Mitovy amin’ny fanafody voatokana hitsaboana ny aretina iray ihany ny asany. Mora kokoa ny vidin’ny fanafody generika izay nomarihin’ity farmasianina ity fa misy dikany ihany koa fa tsy azo hodian-tsy hita. Nohazavainy fa miankina amin’ny olona iray marary ihany ny mety hahasitrana azy amin’ny alalan’ny fividianana fanafody generika na tsia. Misy ihany koa anefa, hoy izy ireo dokotera mitsabo no tena sarotiny satria tsy manaiky ny hampiasana ireny fanafody generika ireny izy ireo fa tsy maintsy ilay voatokana hitsaboana ny aretina mihitsy no tadiavina mba hahazoana fahasitranana haingana. Midika izay fa mbola miavaka ihany ny fanafody voatokana hitsaboana ny aretina iray. Misy amin’ireo fanafody generika ihany koa amin’izao no misy soratra mihitsy hoe : generika tena tsara.